Edebanyela Protocol Ọrụ Ọrụ na Mgbakọ a n'etiti ER Between na Erciyes Aş | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyCentral Anatolia Region38 KayseriEdebanyela Protocol Career na Mgbakọ a n'etiti ERÜ na Erciyes Aş
21 / 01 / 2020 38 Kayseri, Central Anatolia Region, General, Turkey, TELPHER
Ebinyela aka oru ndi mmadu na nzuko ndi mmadu n’agha dika er na erciyes dika
Mahadum Erciyes (ERÜ) na Kayseri Erciyes A.Ş. Edebanyela aka "Nlekọta na Mgbakọ" iji mee ka ikike ụmụ akwụkwọ mahadum na ndị gụsịrị akwụkwọ gbalite ikike.
Kayseri Erciyes A.Ş. Rector nke ERU gaa emume ịbịanye aka na ụlọ ọrụ ahụ. Dr. Mustafa Çalış, Onye isi oche nke Board of Erciyes AŞ. Murat Cahid Cıngı na ndị nkuzi gara.
N’ikwu okwu na emume mbinye aka nke profaịlụ, ERÜ Rector. Dr. Mustafa Çalış, “Dịka ị maara, Mahadum Erciyes bụ mahadum nke na-ahụ maka nsogbu niile dị n’obodo anyị. Mgbe anyị bidoro rectorate ahụ, anyị kwuru ihe ndị a na emume nke Onye isi ala anyị gara. Anyị kwuru na kampos anyị ga-abụ mahadum, ọ bụghị mahadum. Anyị na-agbalị itinye nke a n'akụkụ niile. Anyị na-anwa ime ka ọ dịrị ndụ na anyị chere na anyị na-eme ya. Taa, anyị ga-ebinye aka n’ime otu n’ime ha. Anyị enwetala nnabata ngalaba na Mahadum Erciyes dị ka Litelọ Edemede China, Akwukwo Korea, Oru Asụsụ Japanese, Ederede Asụsụ Russia na Oru Bekee Anyị nwekwara ụmụ akwụkwọ ruru eru na ndị otu ngalaba ebe a. Karịsịa na afọ ndị na-adịbeghị anya, njem njegharị na Erciyes erutewo ọkwa dị oke njọ. Dịka mahadum, anyị na Erciyes AŞ ga-anọ. Echere m na ọ ga-ewetara ụmụ akwụkwọ mahadum anyị nnukwu uru, yana abamuru kwukwara maka Erciyes AŞ. Karịsịa, ụmụ akwụkwọ anyị bụ ndị na-akụzi asụsụ ala ọzọ ma ọ bụ ndị gụsịrị akwụkwọ anyị, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ndị agụmakwụkwọ anyị ga-eme ọmụmụ ihe karịsịa maka ndị njem anyị na Erciyes n'ime usoro nke usoro a. Erciyes AŞ ga-akwadoziri ụmụ akwụkwọ anyị oge obere ma gụchaa ebe azụmaahịa zuru oke. N'ụzọ dị otu a, anyị abụọ ga-enye aka na njem ma na-enye aka na mmepe obodo anyị. "
Kayseri Erciyes AŞ Onye isi oche nke ndị isi oche Murat Cahid Cıngı kwuru, "Taa, dịka ezinụlọ Erciyes, anyị na-arụ ọrụ bara uru. Erciyes Ski na ismlọ njem njem abatala oke njem nlegharị anya n’afọ ndị na-adịbeghị anya site na nkwado nke Obodo anyị. Anyị jizi ndị ọbịa si n'ọtụtụ mba na mba dịka United Nations n'ugwu a. Site na ụgbọ elu ndị ọrụ ọrụ nchekwa, ọtụtụ puku skiers na-abịa Erciyes na skai. O nwere ohere ịbanye na Kayseri wee hụ akụkọ ihe mere eme nke afọ 6 nke mmepe obodo nke obodo anyị. Ọ na-eweta oke akụ na ụba na mmekọrịta obodo na obodo anyị. Yabụ, ọkachasị na afọ ndị na-adịbeghị anya, anyị amụbawanye mkpa ọ dị ndị ọrụ iji rụpụta ọrụ na-asụ asụsụ mba ọzọ. Mara nke ahụ; Nkwado ụlọ ọrụ na mahadum bụ isiokwu a na-ekwu maka ma ọ nweghị ike nweta ihe ịga nke ọma ọ chọrọ na mba anyị. Ọbụlagodi, anyị chọrọ inyochapụta akụrụngwa ndị mepụtara na mahadum anyị dị na Erciyes Ski Center. Na mahadum anyị, anyị nwere ọtụtụ ngalaba na-enye ma asambodo Nlele na Oche Sayensị na Akwụkwọ Ozi. Ya mere, anyị kpọtụrụ ngalaba ndị ahụ na anyị nwere ike ị nweta mahadum anyị ngwa ngwa. ”
Anya Protocol Protocol n'etiti TCDD General Directorate na Mahadum Erzincan…
Usoro Mgbochi Ụgbọ njem nke edepụtara n'etiti TÜBİTAK na IETT
A na-enye ọzụzụ na onye na-enye ọzụzụ n'etiti TCDD na National Education College
Usoro nkwekọrịta jikọrọ n'etiti TCDD na okporo ụzọ okporo ígwè Azerbaijan
Alstom Itu ụzụ Cooperation N'etiti Turkey na Protocol aka
Samulaş na Yeşilyurt Igodo nke nkwalite mmụta ọsọsọ Nna-ukwu kacha elu Ching Hai
Usoro nhazi okporo ụzọ okporo ụzọ e dere
Turkey Common Ịkwụ Ụgwọ Platform Protocol aka
BTSO na ESO Cooperation Protocol Edenyere
Ọmụmụ Ozi Asụsụ Mba Ọzọ maka ndị ọrụ TÜVASAŞ
Aka Egosian Road Protocol bịanyere aka
Aka akara Probcol ORBEL-ODU
Protocol Mbinye aka nke ndi njem nleta 'Kayseri
Nleta ugwu ugwu Erciyes
Protocol Nlekọta na Mgbakọ
Taa na Akụkọ ihe mere eme: 22 Jenụwarị 1856 Alexandria Cairo Line mepere maka Ọrụ